Zụrụ Mifepristone ntụ ntụ (84371-65-3) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Mifepristone ntụ ntụ (84371-65-3)
SKU: 84371-65-3. Category: Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Mifepristone ntụ ntụ (84371-65-3), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa mmachi.
Mifepristone ntụ ntụ, nke a makwaara dị ka RU-486, bụ ihe nwere ike ịmepụta ọgwụ na-emepụta ọgwụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-eme ka a na-ejikọta ya na misoprostol. Nchikota a kariri 95% irè n'oge nke 50 nke mbu nke ime ime. Ọ dịkwa irè n'afọ nke abụọ nke afọ ime.
Mifepristone ntụ ntụ video
Mifepristone ntụ ntụ isi agwa
aha: Mifepristone ntụ ntụ
Molekụla Formula: C29H35NO2
Ọbara arọ: 429.59
Nchekwa Nche: 1806241-263-5
Alfa: D20 + 138.5 Celsius (c = 0.5 na chloroform)
Nche Temp .: 2-8 ° C
Mifepristone ntụ ntụ eji na okirikiri
Mifepristone ntụ ntụ (RU-486), Mifegyne, Mifeprex, ndị ọzọ
Kedu ka o si arụ ọrụ Mifepristone ntụ ntụ
E ji mifepristone ntụ ntụ mee ihe maka izu 10th nke ime ime (ụbọchị 70 mgbe ụbọchị ikpeazụ nke ime nsọ). Ọ ga-egbochi gị ihe ndị dị na mbara igwe (progesterone) dị mkpa maka afọ ime ịnọgide. A na-ejikarị ọgwụ ọzọ a na-akpọ misoprostol. Iji jide n'aka na ị nọ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị mgbe ị na-ewere misoprostol n'ihi na ọbara ọgbụgba, mgbagwoju anya, ọgbụgbọ, na afọ ọsịsa na-amalitekarị n'ime 2 ruo 24 awa mgbe ọ nụsịrị ya mana enwere ike ịmalite n'ime oge 2. Ịgba ọbara ma ọ bụ ịchọta ọbara na-adịkarị maka 9 gaa na 16 ụbọchị kama ọ ga-agbadịrị ụbọchị 30 ma ọ bụ karịa. Ị ghaghị ịlaghachi dọkịta gị maka nyocha ma ọ bụ ultrasound 7 ka ụbọchị 14 weere Mifepristone ntụ ntụ iji gosi na afọ imeala agwụ na iji chọpụta ọnụọgụ ọbara. Were Mifepristone ntụ ntụ kpọmkwem dị ka a gwara.
Ọ dị mma iji Mifepristone ntụ ntụ
Mifepristone ntụ ntụ na misoprostol adịghị eme ka ọ dị mkpa nlekota na gburugburu ebe obibi. "Ezi ojiji nke Mifepristone ntụ ntụ na misoprostol dị mfe. N'adịghị ka ọgwụ ndị ọzọ dị, dị ka doxorubicin ma ọ bụ penicillin maka ogwu, nyochaa ka a ga-arụ n'okpuru nlekọta nke dọkịta iji lelee mmeghachi ngwa ngwa na nke nwere ike ịnwụ, Mifepristone ntụ ntụ. Ọ bụghị misoprostol ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ siri ike ma ọ bụ na ọ gụnyere nlekota oru siri ike ma ọ bụ ọnọdụ dị ize ndụ n'oge na-adịghị anya ma ọ bụ ozugbo ọ kwụsịrị.
Ịdọ aka ná ntị na Mifepristone ntụ ntụ
A maghị ya ma ọ bụrụ na ị na-ewere Mifepristone ntụ ntụ ga-eme ka ohere ịnweta ọgbụgba ọbara dị njọ. Ihe kachasị ndị inyom niile na-eji Mifepristone ntụ ntụ / misoprostol regimen nwere ọhụụ nke ụbọchị 9-16 nke ihe mgbu abdominal, nke na-akpa nwa, na ọbara ọgbụgba ma ọ bụ ịchọta. Ruo 8% nke ụmụ nwanyị na-ahụ ụfọdụ ọbara ọgbụgba n'ime ụbọchị 30 ma ọ bụ karịa. Ihe ndị ọzọ na-adịghị emetụtakarị gụnyere ọgbụgbọ, adịghị ike, vomiting, afọ ọsịsa, dizziness, ike ọgwụgwụ, na ahụ ọkụ. Ọ bụrụ na mmetụta ndị a adịte aka karịa oge 24 mbụ ahụ mgbe ị gụsịrị ọgwụ ọjọọ (misoprostol), chọọ ọgwụgwọ ozugbo ka ha wee bụrụ nsogbu ahụike siri ike.
Mifepristone ntụ ntụ dị ka ọgwụ mgbochi mberede mgbe enweghi mmekọahụ na-enweghị nchebe ('nsị ụtụtụ'); na-emeso ụbụrụ nke ụbụrụ, endometriosis (uto nke anụ ahụ akpanwa n'èzí akpanwa), ma ọ bụ fibroid (ụbụrụ na-abụghị nke na akpanwa); ma ọ bụ ịmalite ịrụ ọrụ (iji nyere aka ịmalite usoro ọmụmụ na nwanyị dị ime). Okwute Mifepristone agaghị eji ya ma ọ bụrụ na ị nwere afọ ime ihe na-adịghị ahụkebe bụ nke dị n'èzí nwa (ime nwa ectopic). Ọ gaghị eme ime na nke a. O nwere ike ime ka ime ime nwa na-agba, nke na-akpata ọbara ọgbụgba.
Ọkpụkpụ na phlegm na-apụtakarị na ọgwụ na-arụ ọrụ na ọgwụgwọ a, mana ịbịakarị na ọbara ọgbụgba nwere ike ime mgbe ụfọdụ wee gosipụta ime. Ya mere, ị ghaghị ịbịa nleta ọ bụla na dọkịta gị na ọgbụgbọ gị na ntanye anya nwere ike njọ na 24 awa mgbe ị nụsịrị ọgwụ ọjọọ (Misoprostol). Dọkịta gị nwere ike ịgwa gị ka ị ṅụọ ọgwụ ndị ọzọ iji nyere aka na-agwọ ọrịa ndị a. Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime ihe ndị a nọgidere na-aka njọ ma ọ bụ na-akawanye njọ, gwa dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ. Nhicha na nyocha nwere ike ịkwụsị ụbọchị 30 ma nwee ike ịdị arọ karịa nkịtị. N'ọnọdụ ndị dị ntakịrị, a ga-akwụsị ịgba ọbara a site n'ịwa ahụ. Ọ bụrụ na ị na-agba ọbara, ehicha 2 na-acha ọcha akwa 2 kwa ụbọchị, ma ọ bụ na-echegbu onwe gị banyere ọbara ọgbụgba, rịọ enyemaka ahụ ozugbo.
Ọ bụrụ na ọgwụ a (Mifepristone ntụ ntụ mbadamba) anaghị arụ ọrụ n'ime ụbọchị 2, dọkịta gị nwere ike inye gị ọgwụ ọzọ. Ọ bụrụ na enwere m ihe mgbu abdominal, adịghị ike, afo iwe ma ọ bụ agbọpụ ma ọ bụ afọ ọsịsa ((afọ ọsịsa), biko kpọọ dọkịta gị ozugbo ọ bụrụ na ị na-aṅụ ọgwụ ndị ọzọ karịa 24 awa. ị ga - ahụ Mgbaàmà nke ọ bụla nrịanrịa ọhụụ gụnyere: ọkụ ọkụ, itching / swelling (karịsịa ihu / ire / akpịrị), oké dizziness, ike iku ume, chọọ ọgwụ ozugbo.
Cheta na dọkịta gị amalitelarị ọgwụ a n'ihi na o kpeelarịrị ikpe na uru gị bara ụba karịa nsogbu nke mmetụta. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla na-esonụ ma eleghị anya, ma dị oké njọ mmetụta, kpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụ kpọọ maka ọgwụgwọ mberede ozugbo: ọkụ n'elu 100.4 ° F (38 Celsius C) maka ihe karịrị 4 awa, oké mgbu ma ọ bụ nro n'okpuru úkwù, Nzuzo , obi ma obu syncope.
Nke a abụghị ndepụta zuru oke nke mmetụta ndị nwere ike ịnweta. Ọ bụrụ na ị chọpụta na ị gaghị edepụta n'elu, pls kpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ ike ozugbo.
Mifepristone ntụ ntụ
Mifepristone ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Mifepristone ntụ ntụ si AASraw
Mifepristone ntụ ntụ Ezi ntụziaka